समाज Archives - Page 214 of 230 - Dna Nepal
एउटै वडाका ४० वृद्धवृद्धा सम्मानीत १२ माघ २०७४, शुक्रबार १४:१६
शान्ता कमली बेंशीशहर, माघ १२ । बेंशीशहर नगरपालिका वडा नं. २ ले वडाभित्रका जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ । वडाले विहीबार कार्यक्रमको आयोजना गरि वडाका ४० जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको हो । वडाका ८४ वर्षदेखि ९७ वर्षसम्मका ४० जना..
लमजुङमा तामाङ सांस्कृतिक उत्सव हुँदै
कास्कीबाट थपिएका शहीदको इतिहास यस्तो छ (पढ्नुस् विस्तृतमा)
यस्तो पो भाग्य ! मृगौला रोगी सन्दिपलाई कार उपहार
पोखरा, माघ ११ । मृगौलामा पत्थरी भएर उपचार गर्न अघिल्लो साता पोखरा आएका पर्वत कुश्माका सन्दिप पौडेललाई भाग्यले साथ दियो । सानै उमेरमा स्वास्थ्यले ठगेपनि उनको भाग्य बलियो निस्कियो । पोखरा औद्योगिक ब्यापार मेलामा ४० रुपैयाँको टिकटले उनी लखपति..
पशुपतिमा गाँजा किनबेच गर्न नपाईने
काठमाण्डौं, माघ ११ । धर्मको नाममा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र गाँजाको व्यापार बढेपछि पशुपति विकास कोष र प्रहरीले पूर्णरुपमा निषेध सुरु गरेको छ । पशुपतिलाई गाँजा निधेषित क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको छ । केही सातायता प्रहरीले पशुपति क्षेत्रमा..
तनहुँमा दुर्घटना, पोखराका युवकको मृत्यु १० माघ २०७४, बुधबार १६:४०
तनहूँ, माघ १० । तनहुँको ब्यास नगरपालिका १२ घासिकुवामा ट्रकमा मोटरसाईकल ठक्कर ठोक्किदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोटरसाईकल चालक कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–६ बस्ने ३० वर्षिय बिबेक अधिकारी छन् । दुर्घटनामा परि गम्भिर घाईते..
भूकम्पपीडितलाई १ लाख अनुदान बढाउने सरकारको निर्णय (बनेका घरको के हुन्छ ?)
काठमाडौं, माघ १० । गाउँका २ सयभन्दा धेरै चेलीलाई भारतका वेश्यालयमा लगेर बिक्री गरेका नुवाकोटका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । चेलिबेटी बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा छोडे पनि केन्द्रीय अनुसन्धान..